Muhiimadu ma aha in la soo saaro baabuur maxalli ah, laakiin waa in la dhiso shabakadda iibka si sax ah. RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaxa ugu muhiimsani maaha in la soo saaro baabuurta guryaha, laakiin waa in la dhiso shabakada iibka si sax ah
19 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
Maahan soosaarista baabuurka gudaha oo muhiim ah, laakiin waa in la dhiso shabakadda iibka si sax ah.
Akadeemiyada Isbeddelka Shirkadaha, oo dejisa ujeeddada laga leeyahay in la siiyo adeegyada la-talin ee ugu kalsoon ee shirkadaha loogu talo galay in lagu horumariyo sii jiritaanka shirkadda iyo isku-duubnaan, oo isbeddel ku sameysa Isbaddelada Ardeyda, ayaa sii wata shirarka wadaagga ee warshadaha.
'Shalay, Maanta, iyo Mustaqbalka' Kulan Automobile ah, oo ay dhexdhexaadinayaan xubin ka tirsan Gudiga Isbadalka Akadeemiyada Bahadır Kayan, ayaa la qabtay. Kahadlayaashii kulanka, oo soo jiidatay xiisa weyn, waxay ahaayeen xubin ka tirsan guddiga TOSB, Farplas CEO iyo Member Board, Member Board Member Board Member Ömer Burhanoğlu iyo xubin guddiga joogtada ah ee Norm / İnci, Fark Holding Advisory Board Member, CCA Exchange Architect Zafer Uran Zaman.
MER BURHANOĞLU: 2000 QAYBAHA KA QAYB QAATAY MACLUUMAADKA 200, Production HADII AY SAMEEYSA
Turkey waa dunida qayb ka mid ah 1,5 boqolkiiba ay helaan suuqa baabuurta, oo ka dhigan TOSB Board Member, Farplas CEO iyo Board Member, Guddiga sharafeedka CCA Xubin Omar Burhanoğlu, ayaa sheegay in go'aanada waqtigii ku saabsan wax soo saarka baabuurta gudaha iyo in situ ay heleen.
Isagoo cadeeyay inaysan adagtahay in maanta la sameeyo gawaarida gawaarida iyo in howsha loo fududeeyay isbadal dhanka dhismeedka ah, Burhano saidlu wuxuu yiri, “Ma ahan wax aad u adag in baabuur la sameeyo mar dambe. Waxa jira isbeddelo badan oo qaabdhismeed ah. 200 qaybood oo waaweyn oo gawaarida ka mid ah ayaa hoos ugu dhacay 20 iyo 2000 kun oo qaybood illaa 200. Si kale haddii loo dhigo, qaybaha waa la yareeyay howshana waa la fududeeyay. Waa suurtagal in hawlgalladaas oo dhan lagu sameeyo shirkado tiro yar. Dhibaato malahan soo saarista gawaarida guryaha. Waxaa lagu gaari karaa qaab ganacsi oo sax ah. Waxa ugu muhiimsan halkan waa in la sameeyo aaladda soo socota. Sababta oo ah marka aan sameyno gaariga ugu horreeya, ma iibin karno ku filan oo aan horumarinno shabakadda iibka, ganacsigan ayaa weli ah tusaale.
Isagoo cadeeyay in dhamaan horumarada qallafsan ee aan ku aragno nolosha guurguurka ay la kulmi doonaan waaxda baabuurta waqtiga dhow, Ömer Burhanoğlu wuxuu carabka ku adkeeyay in warshadaha gawaarida ay u koraan sida barafka oo ay u noqon doonaan warshado waa weyn sababta oo ah gawaarida iskuxiran. Burhanoğlu wuxuu yiri, “Ma lihid fursad aad wax ku soo saarto iyada oo aadan la shaqeynin. Qeybo badan oo kala duwan sida elektironikada iyo softiweerka ayaa sidoo kale lagu soo daray warshadaha gawaarida. ”
WAQTIGA ZAFER URAN: CARS FLIGHT
Isagoo sheegay in tikniyoolajiyaddu ay gaari doonto heer aad u kala duwan 5ta sano ee soo socota, xubin ka ah Guddiga Joogtada ah ee Norm / İnci, xubin Feld Holding Advisory Board Member, CCA Architect Zafer Uran Zaman wuxuu soo jeediyay in gawaaridu ay duuli doonaan. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in nidaamka marinka uu muhiim ka noqon doono horumarkan, Zafer Uran Zaman wuxuu yiri, "Waxaan u maleynayaa inaan go'aan sax ah ka gaarnay gaariga maxalliga ah waqtigii ku habboon. Hadda Toyota waxay magaalo weyn ka dhiseysaa Mount Fuji. Gawaarida halkan, wadooyinku si buuxda ayey u shaqaynayaan. Sida Turkey waa mid aad u nasiib badan. Waxaan u maleynayaa in horumarro wanaagsan ay dhici doonaan haddii aan qiimeyno arrinta iyada oo aan loo eegin siyaasaddu. ” Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in qaar badan oo ka mid ah "OEMs" ay waayi doonaan ama ku dari doonaan muddada soo socota, Zafer Uran Zaman ayaa yidhi, "Waa in aan la iloobin in midowgu sidoo kale uu buuq badan yahay."
Isagoo muujinaya muhiimadda ay leedahay helitaanka macluumaadka saxda ah maanta, Gudoomiyaha Akademiyada Isbeddelka Shirkadeed, Buket Eminoğlu wuxuu u mahadceliyay kuwa ku hadla, kaqeyb galayaasha iyo naqshadayaasha CCA Exchange Architects. Buket Eminoğlu wuxuu caddeeyey inay heleen macluumaad badan oo muhiim ah oo ku saabsan falanqaynta xaaladda hadda jirta iyo mustaqbalka waaxda, oo ka mid ah magacyada waayo-aragnimada u leh waaxda baabuurta, waxayna xustay in shirarka ku saleysan qaybta ay sii socon doonaan muddada soo socota.
Shiinaha oo ku dadaalaysa soo saarista tareenada ugu dheereeya adduunka
Riyadayda ugu weyni waa in la dhiso baabuur telefoon oo Sinopa ah
Heshiis horudhac ah oo lala galay Duray si loo sameeyo iskaashi wada jir ah oo loogu talagalay soo saarista Alstom bogie ş
Mashruuca Xarunta Saadka ee Kemalpaşa ee Kemalpaşa waxaa lagu gaari doonaa Modelka BOT…
İzmir - Mashruuca Xarunta Saadka ee Kemalpaşa waxaa lagu gaari doonaa Modelka BOT…
Qaab-dhismeyaasha Isweydaarsiga CCA
Akadeemiyada Isbedelka Shirkadaha
suuqa gawaarida adduunka
wax soo saarka baabuurta gudaha
Soo saarista gawaarida guryaha